Free Video Player (Windows 8 na-akwado) bụ a free na nkecha video ọkpụkpọ na onwem na ọtụtụ elu atụmatụ. Ọ na-ekere fọrọ nke nta ọ bụla ọdịyo ma ọ bụ video faịlụ na ị itu ya na-enweghị ihe ọ bụla codecs arụnyere. Na ọcha ma na-echebara imewe, na ị na-ekwe nkwa na nke kacha mma na-na-na klas media arụmọrụ. Free download video ọkpụkpọ na-enwe a ngwa ngwa na mgbalị ahụmahụ ugbu a.
Anyị niile n'anya na fim. DVD ọkpụkpọ software ga-enye gị banyere ihe nkiri ahụmahụ. Modern DVD ọkpụkpọ ngwa otú ahụ melite ọdịyo na video atụmatụ. Ị na-enwe ihe nkiri na a dum ụzọ ọhụrụ maka DVD bụ mgbanwe atụmatụ. Taa DVD omume nwere zuru okè ufiop, eke agba na iche nhọrọ nke ka shadowy ma ọ bụ ukwuu illuminated Ebeonodu. DVD ọkpụkpọ software na PC gị na-ewepụta ihe nkiri-edu ntụrụndụ na gị fingertips.
Top 10 Free DVD Players maka Windows na Mac Ọrụ
E e ọtụtụ ngwa si na ahịa nke nwere ike igwu DVD a nile, ma site pụta ìhè WinDVD Media Center dị ka ihe atụ ọzọ ike ụlọ dị ka nke a bụ ihe anyị ga-achọ na anyị kọmputa ma ọ bụ mobile ngwaọrụ. Anyị na-achọghị na-aga gburugburu ịchụ nta maka ihe iji mezuo isi media mkpachapụ aga-eme nanị mgbe anyị chọrọ ya kasị. Hot formats dị ka H264 na VCL bụ ndị nke ukwuu na ina ugbu a na ọ ga-adị mma nwere software dị ka InterVideo ọzọ ngwaahịa. WinDVD 8 Gold inye adịchaghị video playback nkwado.
Ụfọdụ atụmatụ nke WinDVD Media Center:
Akpaka DVD playback
Nchekwa onwe-malitegharịa playback
Were a Snapshots
Mfe Short Videos
Wuru na Foto dị onyenlereanya
Ege gị ntị MP3 Player
Dọwara Your CD
Ọkụ Data Files
2. VLC mgbasa ozi ọkpụkpọ
Dị ka na GOM Player, VLC Media Player bụ obere, ngwa ngwa, na free, àjà a dị mfe video ọkpụkpọ ọzọ na nke ahụ bụ dakọtara nke igbe na a dịgasị iche iche nke video formats. N'adịghị ka GOM Player, Otú ọ dị, VLC Media Player nwekwara ike-eji dị iche iche na Web-dabeere video iyi, n'ihi ya, ọ bụ a viable ọzọ ka QuickTime na ndị ọzọ na ngwọta na-eme ihe dị n'ihu nsọtụ vidiyo ị strimụ kama download.
3. DVD Data Ada Ada
DVD Ada Ada-Data Ada Ada Version 5.1 2013-2014
Na DVD Ada Ada-Data Ada Ada ị ga-isii dị iche iche software ngwọta na otu! The dị iche iche software bụ DVD shrinks DVD copier, DVD burner, Video Ntụgharị, Blu ray DVD Ntụgharị & YouTube video Downloader.
DVD Ada Ada-Data Ada Ada nwere ụfọdụ egwu atụmatụ:
Ịgbanwe DVD Region Codes, Ada Ada niile ụdị DVD, Copy mmepụta oyiri niile ụdị DVD, na-akwado Dual Layer DVD, Nkwado Multi Oge DVD, Re-authoring atụmatụ, Wuru na DVD Player, Ọkụ DVD-akpaghị aka, Mepụta ISO Images na elu àgwà preview.
O nwekwara ụfọdụ ndị ọzọ na atụmatụ: ndabere ọ bụla DVD mfe, Wuru na Video Ntụgharị, Save ISO image n'ime ihe ọ bụla ide DVD.
Mgbe ị chọrọ maka CD na DVD e kere eke ypu nwere ike iji Ulead DVD MovieFactory. Ọ nwere ike na-atụgharị gị foto na vidiyo n'ime elu àgwà DVD fim. I nwekwara ike ọkụ data na music ka CD ma ọ bụ DVD n'otu ntabi n'ụzọ. Ọ dị mfe n'ihi ya Ọkachamara workflow.
Ị nwere ike iji ihe ọ bụla video si camcorders. I nwekwara ike iji VHS etere, DVD ndekọ, TV programsfiles wdg na Ịntanetị. Photos maka slideshows ike ga-eji. DVD discs ga-dị na dezie dere na ya. Ị nwere ike igwu ha na ọ fọrọ nke nta ọ bụla DVD ọkpụkpọ.
Ị nwere ike ọkụ dijitalụ video, VHS fim ma ọ bụ TV omume na dị nnọọ ole na ole nzọụkwụ. Ị ga-adịghị mkpa mmezi siri ike mbanye ohere.
Ọ bụ a free media ọkpụkpọ maka Linux na Windows.It nwere wuru na-codecs, nke pụtara, o nwere ike ịrụ nta niile video na ọdịyo formats. Ọ bụla mpụga codecs na-adịghị mkpa. Ị nwere ike mfe wụnye SMPlayer. Mgbe ahụ ị ga-enwe ike na-egwu nile formats. SMPlayer pụrụ icheta ntọala nke faịlụ niile nke i na-egwuri. SMPlayer bụ ihe inwe-emeri MPlayer n'ihi na ya onyeōzi ọrụ interface (GUI). N'ihi ya, ọ bụ ike nke na-akpọ fọrọ nke nta niile mara video na ọdịyo formats.
DAPlayer bụ a ire ụtọ ma dị ike free video ọkpụkpọ. Ọ na-arụ ọrụ na narị formats. Ọ nwere elu definition video mma. DAPlayer isi nzuzo bụ na ọ na-abịa na ihe karịrị 300 ọdịyo na video codecs na DVD na Blu-ụzarị.
Nakwa dị ka a music ọkpụkpọ ị pụrụ iji ya maka ọkacha mmasị gị fim na TV na-egosi.
Ọ nwere dum nhọrọ nke nhazi nhọrọ nke na-gụnyere maka video, audio, ndepụta okwu wdg Ọ nwere ọjọọ n'akụkụ kwa. Ya akpụkpọ bụ otú ọchịchịrị. Mgbe ụfọdụ menu nchọgharị na-eme ka a bit siri ike.
Mbugharị Player bụ maka Windows PC. Ọ bụ smartest, Customizable na kasị Mgbanwe. Ọ nwere ukwuu arụmọrụ ma hassle free. Ọ na-enye ise-Key usoro nke bụ elu, ala, ekpe, aka nri ma họrọ. O nwere ọtụtụ tupu interfaces dị ka File Browser, Media Library, Agba Controls, Playlist Editor, ibe edokọbara, Audio nhazi ụda, Play History na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere obere ma ọ bụ ọ na kọmputa ahụmahụ, ya mfe atụmatụ a ga-ezigbo maka ha. Ị nwere ike-converted ọ bụla PC n'ime a Home Entertainment Center ntabi na bia Player.
Na ọhụrụ Nero 2014 adịchaghị version e nwere anọ na isi atụmatụ. Otu bụ TV gụgharia, ọzọ bụ disk ka ngwaọrụ akakabarede, nke atọ na otu onye bụ Ultra HD edezi nkwado na ndị ikpeazụ kasị mma na-akakwa mma ngwaọrụ mkpanaaka nkwado. Site na nke a adịchaghị version i nwere ike ide CD, DVD na Blue-ray. All dị ngwa na-egosi na Windows 8-ịke panel. Ọ nwere obere dị iche si Nero-ere Ọkụ ROM. Ya ngwa na-ekewa n'ime anọ na isi edemede. 1. Jikwaa na Play 2. Dezie ma tọghata 3. Rip na Ọkụ 4. nkwado ndabere na mpaghara Nnapụta.
FreeSmith Video Player bụ a free DVD ọkpụkpọ. Ọ na-ese mma na interface bụ nkwafu. Ọ dịghị ihe na ihuenyo akara ma ihuenyo zuru mode anya ọma. Ọ na-ewe obere oghere na PC gị na n'ihi FreeSmith free video ọkpụkpọ bụ nanị 8MB. Ọ dịghị ihe nledo, ọ dịghị mgbasa ozi na ọ dịghị opencandy.
FreeSmith Video Player nwere ike na-egwuri were were video, DVD, Blu-ray na music. Ọ nwere ike na-akwado niile ụdị ọdịyo na video formats. Ebe a nwere nhọrọ iji họrọ sobtaitel, aha, ọdịyo na isi na-enwe. I kwesịghị wụnye Extra Video Codec. I nwekwara ike ile ihuenyo ogbugba ya ihuenyo kpọọ ọrụ.
PowerDVD bụ ọhụrụ media formats, smart cross-ikpo okwu media transcoding na ndị ọzọ na TrueTheater teknụzụ. PowerDVD nwere atọ egwu atụmatụ nke na-inwe-emeri BLU-ray ọkpụkpọ software, mobile ngwa ọdịnala na ígwé ojii ọrụ inye a enweghị nkebi ntụrụndụ ilekota. Ị pụrụ ịnụ ụtọ niile ọkacha mmasị gị media ọdịnaya n'oge ọ bụla na n'ebe ọ bụla.
Ya ugbu a na-akwado ndị ohuru ọzọ-gen elu video format HEVC / H.265. Download HD fim bụ ngwa ngwa karịa gị ugbu a na-eme. Ọ bụ siri ike a afọ uru nke fim n'ime gị mkpa Ultrabook.
Ntak emi Họrọ Free Video Player
-Excellent Playback ahụmahụ DVD na HD fim
E wezụga na-akwado 100+ ewu ewu video na ọdịyo formats, free video ọkpụkpọ (Windows 8 na-akwado) na-enyere ị na-egwu ọ bụla DVD na ihe ọ bụla n'ógbè DVD ọkwọ ụgbọala ngwaọrụ na zuru DVD navigation njikwa. Ekele ya otutu Oke X technology, ọ na-ewe obere oge na-egwu a 1080P / 1080i HD video, dị ka M2TS, WMV, MOV, AVC HD, MPEG, MKV, MOD. na-egwu na nnọọ ala CPU eri ,. Deinterlacing na-nyeere na-enweta elu definition camcorder videos.
-Simplified Media ụtọ na-echebara imewe
Atụmatụ mfe ịkọwa imewe, ihe niile bụ na gị fingertips. Full ihuenyo, Obere mode, n'ihu, weghachi, adị n'elu, jiri nwayọọ, malitegharịa playback, shutdown kọmputa mgbe playback, na ndị ọzọ bụ ndị dị na otu click, ma ọ bụ keukwu hotkey nkwado.
-Intelligent Foto nzukọ nke ọkacha mmasị gị Mpaghara
Mgbe Michael video faịlụ, ị nwere ike onwe na-snapshots ke kiet ke otu click na-azọpụta ya dị ka BMP, JPEG usoro. Karịa nke ahụ, ọ na ọbụna na-enye Foto dị na-agbawa N'ọgbụgba égbè ma kpachie atụmatụ ike pụtara foto album njikere ikere òkè.
- Akwado os: Windows NT4 / 2000/2003 / XP / Vista / 7 na Windows 8
- Processor:> 750MHz Intel ma ọ bụ AMD CPU
- Free diski ike Space: 100 MB ma ọ bụ karịa
- Ram: 256 MB ma ọ bụ n'elu
> Resource> Free> Top Iri Free Video Players Play Video, Audio Kpamkpam